Zorin OS 9 yakagadzirira, iyo Linux yevashandisi veWindows | Linux Vakapindwa muropa
Zorin OS 9: iyo Linux yeWindows uye Mac OS X vashandisi
Isaac | | Kugoverwa, Desks
Zorin OS Iko kugoverwa kweLinux kwatakatotaura nezvayo mune ino blog uye izvo zvakavakirwa paUbuntu. Zvino tazivisa Zorin OS 9, iyo nyowani vhezheni yeiyi distro yedesktop. Iyo yakafanana neUbuntu neLinux Mint, iri nyore uye kunyanya yakanangana nevashandisi vanobva kuMicrosoft Windows chikuva.
Uzivi yeiyi inoshanda sisitimu ndeyekuve nyore uye nyore kushandisa system, kuitira kuti vashandisi vasina ruzivo muLinux vanogona kushandisa sisitimu yakavakirwa pane ino kernel vasina kana kuzviona. Kunyanya kana ichibva kuWindows, iine yakafanana yakafanana interface.
Zorin OS 9 ichave yakagadziridzwa ku2019, uko rutsigiro rwako ruchaguma. Saka iyi rutsigiro rwakawedzerwa ruchapa kugadzikana kune vashandisi veiyi distro. Zvimiro zvaro zvikuru zvinogona kuoneka nekungotarisa, graphical interface yakafanana neWindows XP kana 7 nekuda kwetimu dzeGNOME.
ari zvinodikanwa zvishoma Iwo ari 1Ghz x86 kana x86-64 processor, 5GB ye hard disk, 512MB ye RAM ndangariro uye mifananidzo inokwanisa kutsigira resolution ye640 × 480 px. Sezvauri kuona zvimwe zvinodiwa kwete zvakare zvinoda.
Kunyange zvakadaro kugovera Iyo yemahara kune ayo edhisheni Core (yekutanga vhezheni neGNOME desktop), Lite (yemakomputa ane mashoma zvigadzirwa zvehardware) uye Dzidzo (yakagadzirirwa vadzidzi), kune zvakare yakabhadharwa vhezheni inonzi Premium. Pamari shoma yemari iwe yaunogona kutarisira iyo Premium Bhizinesi edhisheni (kumakambani madiki nepakati nepakati, ane accounting software, dhatabhesi, manejimendi, ...), Premium Multimedia (kunyanya yekugadzirisa odhiyo, graphic dhizaini, 3D modelling, nezvimwewo.
Iyo yemahara vhezheni inotaridzika yakafanana neWindows, nepo iyo Premium Inopa nharaunda senge Mac OS X. Kunyangwe muPrimiyamu iwe unogona zvakare kusarudza madingindira akafanana neWindows ine GNOME nharaunda, Kubatana senge Ubuntu uye zvirokwazvo OS X sezvatakambotaura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Zorin OS 9: iyo Linux yeWindows uye Mac OS X vashandisi
Ini ndashandisa Zorin imwe nguva seimwe distro kuyedza kubhurawuza, asi zvinoita senge kwandiri kuti haina chinhu chitsva chekupa kumushandisi anoziva Gnu / Linux. Iyo ndeimwezve rehash yeUbuntu iyo inongoshandura madingindira uye interface zvikamu zvaunogona kuisa mune chero distro. Asi chokwadi ndechekuti kana iwe ukaisa Zorin pane mumwe munhu anobva kumahwindo uye achifunga kubata linux kekutanga uye ari kufunga kutama, ndiyo imwe yesarudzo dzakanakisa. Kune icho chikamu, chinogona kubatsira zvakanyanya, kunyangwe ndichifunga kuti kana mumwe achienda kuLinux, haifanirwe kunge iine "kabhoni kopi" yeWindows. Linux iLinux uye haina kunyepedzera kuita kunge chero chinhu. Asi hei, kune avo "vakavharwa" vasina imwe sarudzo kunze kwekushandisa linux chero chikonzero chichauya chinobatsira.
Pasatealinux iwe unonyora seyakavharwa. Uku kusiyanisa kunoshoresa kunoita kuti mushandisi weLinux asatarisike pane mushandisi weWindows.
Izvo zvinotaridzika kunge zvidiki, mubvunzo ndewokushandisa Linux. Zvimwe zvese mashanga epfungwa.
Kana uine mazana evashandisi veWindows uye urikuedza kutamira kuLinux, ichi chishandiso chinobatsira. Kazhinji mushandisi haaendi nekuzvidira kuenda kune linux. Kana iwe ukaita kuti hupenyu huve nyore kune wako wekupedzisira mushandisi uye kwauri, ndiani wauri kuenda kunodzidzisa, zvese zvirinani. Inonakidza imwe nzira.
Pindura kuna Ebheri
iwe unonyora seyakavharwa. Iko kusiyanisa kunoshoresa kunoita kuti mushandisi weLinux aonekwe akasiyana nemushandisi weWindows.
Izvo zvakafanana nemuviri naLubuntu uye kwete Ubuntu .. Ini pachangu, ini ndinoda Lubuntu zvirinani kupfuura Ubuntu neZorin OS, asi kune zvinonaka zvezvose….
Ndezvipi zvidiki zvinodiwa kuti uise zorin os 9 lite vhezheni?
Rose chanza akadaro
Mhoro shamwari .. ndine dambudziko rekuravira. hama yangu kubva kusina basa akachinja desktop yeOS Zorin 9, kuenda kuGNOME CLASIC maitiro
Ini ndoda kudzosera desktop yangu yekutanga kubva kuZorin OS 9 - Kugoverwa kweLinux kwevashandisi veWindows
Pindura kuna Rosa Palma
Nzira yekuita sei iyo yekutanga inobhadharwa vhezheni, ini ndinobhadhara sei uye ndinoiwana kupi muBolivia? Ini handina account yekubhangi kana chero mhando yemabhanga echikwereti makadhi zvakadii ndapota nditumirei mhinduro ini ndinofarira ino ZORIN 10 inoshanda system
Pindura kuna Lobo
maitiro ekuona 3d desktop sezvainoonekwa pane zvivharo
Pindura kuna raul
Uye mushure megore ra2019? Ichauya imwe vhezheni yeZorin, ikozvino yakafanana neWindows 10 kana chii?
CHITSAUKO WOLF akadaro
Haana kupa mhinduro kumubvunzo wandakamubvunza, ndinoda iyo SO ZORIN asi mahara kana uchikwanisa kuitumira kuemail yangu ndinotenda nekuti munyika mangu hamuna nzvimbo yekutenga nemari
Pindura Grey WOLF
Alberto Alarcon akadaro
Ini ndinogadzira makomputa uye pavanondipa PC yekare, ini ndinowanzoisa ma distros kuti nditore mukana weyakare Hardware, izvi zvinoita kuti mutengi wangu achinje kubva paWindows kuenda kuLinux uye njodzi yehutachiona inobviswa mundangariro dzavo. Izvi ndizvo zvinoita kuti mabasa aya ave akakosha kwandiri, hachisi chinhu chidiki. Ipapo vatengi vanozofunga kuti vachachinja zvachose mamwe makomputa avo kuLinux ...
Pindura kuna Alberto Alarcon
Mhoroi, ndiri mushandisi weWindows uye ndinokwezvwa neLinux nekuda kwe "mahara". Vavhareji kana vepamberi vashandisi veLinux, havanzwe vachirwiswa neavo vari vanhuwo zvavo uye vasina ruzivo muLinux uye "vanoda" chikuva chakafanana nechitarisiko nekushanda kune zvatinoziva (Windows), asi zvinoguma nechiitiko chinogumbura chatinopedzisa. kusimuka. Kana avo vanogadzira Linux vanogona kunzwisisa zvinoitika kwandiri uye zvinonyatsoitika kune vamwe vanhu vazhinji, vanowana vazhinji vateveri. Ini ndatozivisa kuti ndinofarira kwazvo. Nhanho yakanaka kwandiri uye zvirokwazvo kune vamwe vazhinji.-
Chikunguru, linux ichagara ichinetsa. Isa iyo uye mumazuva mashoma iwe uchaona kuti, kunze kwesoftware padanho rakadzika kwazvo, iri toyi system inoitwa nevechidiki.
Kufananidza: yakanakisa GNU Linux kugoverwa kwa2014
Nova 2015: iyo yeCuba Linux kugovera